Fundamental Articles for Forex | FXCC
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - Forex Fundics
Articles forex Fantaro ny tsenan'ny Forex ary ny tena ilaina mba hanampy anao hahatakatra ny fototra ara-barotra. Ny lahatsoratra rehetra omenao dia hanampy anao hampitombo ny fahalalanao sy hampitombo ny fahatsiarovanao ny indostria ankapobeny.
Inona no atao hoe Swing Trade amin'ny Forex?
Amin'ny fotoana tsy tapaka, ny tsena forex dia manatri-maso fanangonana paikady varotra samihafa. Samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany, saingy ny tetika sasany dia manana rakipeo matanjaka kokoa noho ny hafa raha ny amin'ny fahatratrarana ny zava-bita.
Ny varotra Swing dia nahazo laza malaza teo amin'ireo mpivarotra forex noho ny fahaizany manavaka ny varimbazaha amin'ny katsaka. Misy mihevitra azy io ho endrika ifotony amin'ny varotra forex.
Fa inona ny varotra varotra, ary nahoana isika no miresaka momba izany?
Inona no atao hoe fitoviana amin'ny forex?
Inona no zavatra voalohany tonga ao an-tsainao rehefa mandre ny teny hoe "Equity" ianao?
"Toa ny fampitahain'i Einstein amiko".
Eny, valiny diso!
Ny fitoviana dia tsotra kokoa noho ny fampitoviana sarotra.
Andao hiezaka ny hitady hoe inona marina ny atao hoe equity amin'ny forex.
Ohatrinona ny vola ilainao hanombohana ny varotra Forex?
Ny iray amin'ireo fanontaniana mahazatra tadiavin'ny mpivarotra vaovao dia ny habetsaky ny renivola ilainy hanombohana varotra forex.
Dolara an-tapitrisany ve, sa afaka manomboka amin'ny $ 100 ianao?
Hamaly ity fanontaniana ity amin'ity boky ity izahay.
Noho izany, raha olona mitady hanomboka ny dianao varotra ianao dia alao antoka fa mijanona hatramin'ny farany ianao.
Inona ny tetika fivarotana Forex tsara indrindra?
Ny fanaovana pips, mitazona azy ireo ary mamerina ny fizotrany no lakilen'ny tombom-barotra azo antoka amin'ny varotra forex.
Mampalahelo fa tsy tsotra araka ny fijeriny azy io.
Tsy maintsy mamolavola paikady varotra ianao izay manome anao tombony amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena, fitantanana ny risika mafy, ary ny fahazoana mafy ny psikolojia varotrao.
Fa inona amin'ny anaran'Andriamanitra no tetika fivarotana forex, ary nahoana isika no miresaka momba izany?
Ahoana ny fomba hametrahana fihenam-bidy ary ahazoana tombony amin'ny Forex?
Ny lafiny lehibe indrindra amin'ny mpivarotra dia ny manangona sy mitahiry tombom-barotra.
Raha very ny volanao rehetra dia tsy misy fomba hamerenana ny fatiantoka anananao; ivelan'ny lalao ianao.
Raha manao pips ianao dia tsy maintsy tazominao fa tsy averinao any an-tsena.
Na izany aza, andao hanao ny marina. Ny tsena dia manao izay tiany foana ary miova amin'ny làlana tiany.
Inona no atao hoe Margin maimaim-poana amin'ny Forex
Angamba ianao efa nandre ny teny hoe "maimaim-poana" amin'ny varotra forex teo aloha, na angamba fe-potoana vaovao tanteraka aminao io. Na izany na tsy izany, lohahevitra iray lehibe tsy maintsy takatrao izany mba ho lasa mpivarotra forex mahay.
Amin'ity torolàlana ity dia hofongarantsika ny maridrefy malalaka amin'ny forex, ny fomba fanisana azy, ny fifandraisany amin'ny leverage, ary maro hafa.
Ka alao antoka fa mijanona hatramin'ny farany ianao!
Inona ny fifanakalozana andro amin'ny forex
Ao amin'ny tontolon'ny adrenaline amin'ny varotra andro forex, mety hitranga tampoka ny zava-drehetra.
Ny varotra amin'ny andro Forex dia mety ho orinasa mahasoa (raha mbola manao izany amin'ny fomba tsara ianao). Na izany aza, mety ho sarotra ho an'ny vao manomboka izany, indrindra ireo izay tsy vonona tsara amin'ny paikady voaomana tsara.
Na ireo mpivarotra efa za-draharaha indrindra aza dia hahita olana sy hamoy vola.
Noho izany, inona marina ny fifanakalozana andro sy ny fomba fiasan'izy io? Andao hiezaka hahalala!
Inona ny kaonty Demo amin'ny Forex?
Raha toa ianao ka vaovao amin'ny varotra forex, dia fanontaniana iray miharihary izay hipetraka ao an-tsainao ny hoe a kaonty demo forex, ary ahoana no ahafahanao mivarotra aminy?
Betsaka ny vao manomboka no tsy mahalala ny momba ny kaonty demo sy ny fomba fiasan'izy ireo.
Amin'ity toro-lalana ity dia hamaly ireo fanontaniana ireo izahay ary hampahafantatra ny antony tokony hanombohanao mivarotra amin'ny kaonty demo.
Amin'izao fotoana izao ny mpivarotra dia mahazo fidirana amina fitaovana mitombo isa, manomboka amin'ny tahiry FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, ary Google) ka hatrany amin'ny tontolon'ny forex haingana.
Ny fisafidianana ny iray amin'ireo tsena ireo hivarotra dia mety ho sarotra, ary be dia be ny lafin-javatra tokony ho raisina mba hanao ny safidy tsara indrindra.
Noho izany, ilaina ny mahafantatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny tsena roa sy ny iray tokony harahinao amin'ny varotra.
Raha vao manomboka mitady ny dianao varotra ianao dia hanampy anao ity torolàlana ity.
Pairs Forex tsara indrindra amin'ny varotra
Miaraka amin'ny tsiroaroa maro azo isafidianana, ahoana no ahafahanao misafidy ireo mpivady forex tsara indrindra hifanakalozana?
Ity no ho hitantsika ato amin'ity torolàlana ity.
Hofoaninay ny karazana mpivady vola samy hafa, ary iza amin'izy ireo no afaka mampiakatra ny tombom-barotrao.
Noho izany, andeha isika hanomboka!